Qalabka Alxanka otomaatiga ah, Qalabka Jarida & Qalabka Beveling - Lusheng
Wuxi Lusheng Intelligent Equipment Co., Ltd. waxay ku taalaa magaalada dalxiiska quruxda badan leh ee caanka ah- Wuxi.Our waxaa la aasaasay sanadkii 2004, waxay si joogto ah u horumarinaysaa iyadoo la adeegsanayo hordhac iyo tababar tayo leh, jaangoynta maamulka iyo dhismaha dhaqanka ganacsiga. Haatan shirkadeenu waxay haysataa hanti dhan toban milyan oo dheeraad ah waxayna daboolaysaa aag dhan 6,000 oo mitir murabac ah. Wax soo saarkayada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah Qalabka Alxanka otomaatiga ah, Qalabka Jarista CNC iyo Qalabka Beveling, Khadadka Waxsoosaarka Pipe / Wind Tower iyo wixii la mid ah. Waxyaabahani waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa aagga mashiinnada injineernimada, mashiinnada kiimikada, soosaarayaasha weelka kululeeyaha / cadaadiska, mashiinnada macdanta qodista, nidaamka tamarta nukliyeerka iyo wixii la mid ah.
Saxan steel Automatic siman la siman Strai ...
Automatic CNC PLC darfihiisa jejebiyey foorarsiga ma ...
Sheet bir Automatic flat geesaha wareega ...
Nadiifinta Magnetic Deburring nadiifinta nadiifinta ...
CNC Rotary biraha saxan bir bir birta ah ...
Macluumaad loogu talagalay xallinta qaabeynta meeraha
Unugyada aasaasiga ah ee ka kooban shabakadda waa Ahraamta saddex-geesoodka ah, prisms-ka saddexagalka ah, xabadaha, Ahraamyada laba jibbaaran ee la jarjaray iyo wixii la mid ah. Cutubyadan aasaasiga ah waxaa lagu dari karaa ...
Macluumaad loogu talagalay H alxanka safka alxanka
Mabda'a shaqada ee mashiinka iskudhafka tooska ah ee H-beam iyo faa'iidooyinka mashiinka isku dhafan ee tooska ah ee H-beam: mashiinka isku-dhafan ee H-beam ...
Macluumaadka wareejinta alxanka
Jir rullaluistemadka alxanka waa aalad gargaar alxanka caadi ahaan loo isticmaalo, kaas oo si ballaaran loo isticmaalo habka wax soo saarka alxanka. Badanaa waxay ku tiirsan tahay khilaafka u dhexeeya alxanka ...